Izindawo ze-Honeymoon e-United States | Ukuhamba kwe-Absolut
Izindawo ze-Honeymoon e-United States
Luis Martinez | | E-USA
Izindawo ze-honeymoon e-United States zihlukahlukene njengezwe laseNyakatho Melika uqobo. Kulokhu ungathola kusuka ezingwadule ezinkulu kuye emabhishi amahle noma emadolobheni amakhulu anezigidi zezakhamizi nezindawo ezihehayo eziyingqayizivele emhlabeni.
Kuzo zonke lezi zizathu, akulula ukukhetha izindawo ezimbalwa zokwenza i-honeymoon e-United States. Singakhuluma nawe, isibonelo, mayelana i-america ejulile, lapho uzozwa khona ingqikithi yezwe. Kepha futhi kwezinkulu futhi ezinabantu abaningi Texas, lapho ungeke uzizwe ungajwayelekile ngoba iSpanishi sikhulunywa kakhulu njengesiNgisi. Kunoma ikuphi, sikhethe wena nomlingani wakho izindawo eziyisithupha i-honeymoon engeke ikushiye ungenandaba.
Sizoqala ukuncoma kwethu nge OGwini olusentshonalanga ukuhamba kamuva emabhishi afudumele e Florida bese uphela kokungajwayelekile IHawaii. Kodwa-ke, sizokwenza ezinye izitobhi ezingathandeki kangako endleleni.
1 I-West Coast, i-Hispanic California kakhulu
2 I-Sunny Florida: Miami eya e-Orlando
3 I-New York Cosmopolitanism
4 ICold Alaska
5 Umzila 66, indawo oya kuyona e-United States uma uthanda kakhulu
6 IHawaii, phakathi kwezindawo eziyintandokazi zabasanda kushada
I-West Coast, i-Hispanic California kakhulu
Ngokwengxenye ngenxa yefa layo elicebile laseSpain, sincoma iCalifornia enhle njengendawo ephezulu yokuya kukankosikazi e-United States. Ungaqala uhambo nonkosikazi wakho omusha edolobheni elihle lase i-San Francisco.
Okufanele kubonwe kuyo kukhona iSango legolide lezothando, nokushona kwalo okuhle; indawo edumile ye-Painted Ladies, enezindlu zama-Victori; ILombard Street, nendlela yayo egwegugayo, noma iPier 39 eFisherman's Wharf, egcwele izithombe. Futhi bonke abagibela trams zabo ezibonakala zikuhambisa kwenye inkathi.
Kepha iCalifornia ikunikeza okuningi. Ungasondela ku Isigodi saseNapa, nezivini zayo ezibabazekayo. Futhi naku Ipaki likazwelonke laseYosemite, yamemezela iNdawo Engamagugu Omhlaba, enezimpophoma nezintaba zayo ezinkulu. Vele, uma sikhuluma ngemvelo, ungafinyelela kufayela le- IGrand Canyon yaseColorado, eduzane Arizona, lapho uzobona khona izindawo eziyingqayizivele emhlabeni.
Kepha, uma ubuyela eCalifornia, awukwazi ukuyishiya ngaphandle kokuvakashela Los Angeles, ogama lakhe libonisa imvelaphi yalo yaseSpain. Indawo ethandwa kakhulu edolobheni laseLos Angeles ngokungangabazeki iHollywood, enezitudiyo zayo zama-movie nezindawo zayo eziningi ezikhangayo. Ungayeki ukuhamba nge-Walk of Fame, lapho izinkanyezi ziqopha izandla zazo. Kepha kufanele futhi usondele eBeverly Hills, nezindlu zayo ezinhle, nendawo yokuthenga yeRodeo Drive. Futhi, ekugcineni, ungazi i-bohemian kakhulu yaseLos Angeles eVenice Beach futhi ujabulele ulwandle lwayo noma iSanta Monica enhle kangako.
I-Sunny Florida: Miami eya e-Orlando
Futhi iFlorida enhle ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuya ku-honeymoon eMelika. Amabhishi aso amhlophe anesihlabathi esimhlophe namanzi acwebezelayo ayisimangalo esifanele. Kepha, ngaphezu kwakho konke, kunezindawo ezimbili esifuna ukukhuluma nawe ngazo.
Esokuqala ukuthi Orlando, idolobha lamapaki wetimu. Uma ufuna ukuvuselela uhlangothi lwakho lobuntwana, yindawo efanelekile. Ngoba uzozithola zazo zonke izinhlobo, kusukela eWalt Disney World Resort nase-Universal Orlando Resort kuya emapaki asolwandle njenge-SeaWorld engathandwa kangako.
Ngokwengxenye yayo, owesibili ngumuzi wase Miami, ophakathi koLwandlekazi i-Atlantic kanye namandla amakhulu Ama-everglades. Sesivele sishilo ngamabhishi, kepha futhi ungahamba uye kuma-XNUMX ngokuvakashela indawo yangakini i-art deco kusuka e-Ocean Avenue; cwilisa iCuba kulokho kwe I-havana encane noma ujabulele ukubuka komhlaba wonke komhlaba kusuka eMetromover, edabula phakathi nendawo kumathrekhi aphakeme. Ekugcineni, jabulela izinhlobonhlobo zezinyoni zaseJungle Island namathafa aluhlaza e- I-West Key, iphuzu eliseningizimu kakhulu kulo lonke elase-United States.
I-New York Cosmopolitanism
Kunoma iluphi uhambo oluya e-United States, kucishe kuphoqeleke ukuthi kunconywe idolobha lamabhilidi, okuyisibonakaliso esiphakeme kakhulu se-cosmopolitanism. Kuyaziwa kahle ukuthi akudingekile ukusho amaphuzu ayo athakazelisa kakhulu.
Kepha sizokukhumbuza ukuthi uvakashele iphaphu elikhulu lomuzi lelo Central Park nokuthi ukhuphukela ku Umbuso Wombuso, lapho uzothola khona ukubukwa okuhle kakhulu kweNew York. Ngemuva kwalokho, ungangena esikebheni esikebheni se- Isifanekiso senkululeko, udabule phakathi kwe- UFifth Avenue, yazi isiqhingi sase-Ellis, lapho abokufika babejwayele ukufika babone umbukiso ku Broadway.
Kepha, ngaphezu kwakho konke, kuyinto evamile ukuvakashelwa Times Square, enezimpawu zayo ezinkulu ze-neon. Futhi iya komunye weminyuziyamu emangazayo edolobheni (kuphela esiqhingini sase Manhattan cishe angamashumi ayisithupha). Isibonelo, iMetropolitan of Art, i-Modern Art, i-Natural History noma iGuggenheim.
Esinye isayithi elihehayo phakathi kwezindawo zaseMelika zokuya ku-honeymoon kubanda kodwa kuyamangalisa i-Alaska. Eqinisweni, ihlobo ezindaweni zalo ezisogwini naseningizimu yeBrooks Range akubandi njengoba ungacabanga.
Uma ufuna ukujabulela izindawo ezinkulu ezigcwele izimangaliso zemvelo, lokhu kufanele kube indawo oyikhethile. Phakathi kwalezo zindawo, kuphoqelekile ukuvakashela i- IDelani National Park, uzungeze intaba enegama elifanayo, okuyindawo ephakeme kakhulu eNyakatho Melika. Futhi, kanye naleso esedlule, i- ichibi paxton, indawo yokudoba ama-salmon ye- I-Cooper Landing neqhwa UMatanuska, ngamakhilomitha angamashumi amane ubude ngamakhilomitha ayisithupha ububanzi.
Ungabona futhi enye insalela yokushesha kwegolide: the imayini ye-fairbanks. Futhi akumele ushiye i-Alaska ungazi Anchorage, idolobha elinabantu abaningi esifundazweni, yize inhlokodolobha yalo kuyiJuneau. Kepha, ngaphezu kwakho konke, uma kungenzeka, gibela iRiverboat Discovery, isikebhe esidonsa emfuleni iTanana naseChena ngemibono emangalisayo.
Umzila 66, indawo oya kuyona e-United States uma uthanda kakhulu
Uma uthanda i-adventure nezithuthuthu, siphakamisa ukuthi uvakashele i-Ribe 66, exhumanisa zombili iziqhingi zezwe, ukusuka eLos Angeles kuya eChicago. Kuyindlela eyingqayizivele yokwazi i- I-america ejulile efakiwe ezifundazweni ezifana Missouri, Kansas, Oklahoma o Texas.
Mhlawumbe awusiye abalandeli bezithuthuthu ezinkulu zokuhamba. Akunandaba, umzila ujatshulelwa ngokulingana ngemoto noma ikhaya elihambayo. Kulezo zizwe ezisenkabeni yezwe uzonambitha entshonalanga endala kakhulu. Kepha, ngaphezu kwalokho, uzokwazi amadolobha afana nelakho Chicago, eneminyuziyamu yayo noMichigan Avenue, yize iWillis Tower iyinto edingekayo, ingilazi yaso engakulungele labo abaphethwe yi-vertigo.
Ungavakashela futhi Kansas City, enezimpawu ezinkulu ezivela ku- western nokuthi namuhla ngumuzi wemithombo, njengoba cishe unekhulu namashumi ayisithupha. Futhi, ngokulandela umzila, amathafa amakhulu ase-Oklahoma, eNyakatho neTexas, ENuevo México ngenhloko-dolobha yayo iSanta Fe, Arizona futhi ekugcineni California.
Ngamafuphi, uhambo lonke lokuzidela ngalokhu okubizwa nge- "Main Street of America", elinamakhilomitha angaphezu kwezinkulungwane ezimbili nezinhlobonhlobo zamathafa, izindawo eziyizifanekiselo namadolobha amakhulu.
IHawaii, phakathi kwezindawo eziyintandokazi zabasanda kushada
Yonke indawo oya kuyo i-honeymoon eMelika iyamangalisa, kepha isimo esiyingqayizivele saseHawaii siphakathi kwezintandokazi zabasanda kushada. Eqinisweni, minyaka yonke ithola izinkulungwane zemibhangqwana efuna ukuchitha izinsuku zayo zokuqala njengombhangqwana lapho.
Amabhishi alo amahle anamagama ayinkimbinkimbi njengoba emuhle. Phakathi kwabo, lokho kwe I-Laalao, nokushona kwalo okumangalisayo; lokho kwe UKolekole, ezungezwe uhlaza oluchumayo, noma olwe Holohokai, ikulungele ukujwayeza ukuntweza nge-scuba.
Ngakolunye uhlangothi, ku U-Isla Grande Uzothola izinhlobo zezitshalo ezinkulu kunazo zonke esifundazweni sonke emapaki emvelo njengeSouth Point noma iPuukohola Heiau, nayo enezimpophoma ezihlaba umxhwele. Kepha, ngaphezu kwakho konke, kufanele uvakashele ifayela le- Izintaba-mlilo iNational Park, uhlobo lwe Isikhathi iphindaphindwe ngeshumi.
Kunalokho, Oahu ikunikeza uhambo olunamasiko amaningi. Kulesi siqhingi, ukuvakashela i- IsiGodi Samathempeli, kodwa ngaphezu kwakho konke isisekelo esidumile semikhumbi ye pearl Harbour kanye neMnyuziyamu Yombutho Wezempi wase-United States, lapho uzobona ubukhulu bokuhlaselwa kweJapan ngo-1941.
Kepha, uma ufuna ukuhlala eduze kakhulu, isiqhingi sakho sinjalo Maui, lapho kukhona namapaki emvelo amangalisayo afana nalawa Haleka y Isifunda sase-Valley, kepha uzophinde uthole ubuhle bomuzi omncane onjenge Lahaina, inhlokodolobha yayo futhi eyayiyiHawaii.
Itheku elidala le-whaling, kunendlela yomlando emigwaqweni yayo ebizwa Umzila Womlando waseLahaina. Isayinwe ngokuphelele futhi idlula cishe ezindaweni ezingamashumi amathathu ezithakazelisayo. Phakathi kwalezi, iBanyan Tree Park, lapho uzobona khona imikhiwane emikhulu kunayo yonke e-United States; isakhiwo esidala seCity Hall; iBaldwin House, eyakhiwa izithunywa zevangeli ezingamaProthestani ezafika esiqhingini maphakathi nekhulu le-XNUMX, kanye neJele laseHale Paahao, lapho izigebengu zazingeniswa khona enkathini efanayo edlule.
Sengiphetha, siphakamise wena izindawo eziyisithupha ze-honeymoon e-United States. Zonke ziyamangalisa, kepha, njengoba kunengqondo ezweni elikhulu kangaka, kunezinye eziningi. Ngokwesibonelo, Las Vegas, lapho kungabikho ukuntuleka kobumnandi futhi hhayi konke okuxhunyaniswe nomdlalo, noma ENingizimu Carolina futhi ikakhulukazi Charleston, ngesitayela sakhe saseningizimu ngokungangabazeki. Ngamafuphi, ukukhetha kungokwakho, kepha uma ukhetha ukuchitha isikhathi sakho sangemva komshado e-United States, ngeke uzisole.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Izindawo ze-Honeymoon e-United States
Isifunda semivubukulo saseTierradentro, eCauca